Ungayibeka kanjani i-watermark esithombeni ngocingo ne-PC 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Ungasithengisa kanjani isithombe ngocingo ne-PC
Ukubeka i-watermark esithombeni kuyindlela yokuxhumanisa igama lakho noma ibhizinisi nesithombe. Njengamanje, kunezinhlelo nezinhlelo zokusebenza ezimbalwa ezikuvumela ukuthi ufake i-logo yakho, kungaba kufoni yakho noma kwi-PC yakho, ngezinyathelo ezimbalwa. Bheka ukuthi kulula kanjani.
Ukufaka i-watermark esithombeni efonini yakho, masisebenzise uhlelo lokusebenza lwe-PicsArt. Ngaphezu kokukhululeka, ikuvumela ukuthi usebenzise zombili isithombe nombhalo, ngendlela yomuntu uqobo. Ngakho-ke, ngaphambi kokulandela igxathu negxathu, kubalulekile ukulanda uhlelo lokusebenza kudivayisi yakho ye-Android noma ye-iPhone.
1. Vula i-PicsArt bese wenza i-akhawunti noma ungene ngemvume ngedatha yakho ye-Gmail noma ye-Facebook;
Uma kwenzeka ubona isiphakamiso sokubhalisela uhlelo lokusebenza, thepha i- X, imvamisa itholakala phezulu kwesikrini ukuvala isikhangiso. Inketho yokufaka i-watermark iyatholakala ezinsizakalweni zamahhala zensizakalo.
2. Esikrinini sasekhaya, thinta i- + ukuqala;
3. Thinta isithombe lapho ufuna ukufaka khona i-watermark ukuyikhetha. Uma ungayiboni, iya ku- Zonke izithombe ukubuka zonke izithombe ezitholakala kudivayisi yakho;
4. Hudula ibha yamathuluzi ezansi kwesithombe ukuze ubone yonke imisebenzi. Ngithinte Umbhalo;
5. Ngemuva kwalokho bhala igama lakho noma elenkampani yakho. Thepha isithonjana sokuhlola (✔) uma usuqedile;
6. Ngaphambi kokuba uqale ukuhlela, beka umbhalo endaweni oyifunayo. Ukuze wenze lokhu, thinta bese uhudula ibhokisi lombhalo.
Kungenzeka futhi ukwandisa noma ukunciphisa ibhokisi lombhalo futhi, ngenxa yalokho, incwadi, ngokuthinta nokuhudula kumibuthano evela emaphethelweni ayo;
7. Manje, kufanele usebenzise amathuluzi wokuhlela umbhalo ukushiya i-watermark ngendlela othanda ngayo. Izinsizakusebenza ezilandelayo ziyatholakala:
Fuente: Inikeza izitayela ezahlukahlukene zezinhlamvu. Uma uthinta noma yikuphi, kusetshenziswa umbhalo ofakwe esithombeni;
Kor: Njengoba igama lisho, likuvumela ukuthi ushintshe umbala wencwadi. Bheka ukuthi kungekudala, kusenezinketho zokufaka i-gradient nokuthungwa;
Edongeni: ikuvumela ukuthi ufake umngcele encwadini bese ukhetha ukushuba kwayo (kubha Inani);
Ithuba: shintsha ukubonakala kombhalo. Lesi isici esibalulekile ukuze i-watermark ifakwe ngendlela ecashile, ngaphandle kokuphazamisa ukubuka kwesithombe;
Sombra: umsebenzi ukufaka ukufakwa kwencwadi. Ivumela ukukhetha umbala we-shading, kanye nokulungisa ukuqina kwayo nokuma kwayo;
Bueno: ifaka i-curvature egameni noma emshweni, ngokuya nge-engeli echazwe kubha Ukugoqa. Ngokuya ngohlobo lwebhizinisi onalo, unganikeza umkhiqizo wakho ukuthinta okukhululekile.
8. Ngemuva kokuhlela, iya kusithonjana sesheke (✔) ekhoneni eliphezulu kwesokudla kwesikrini;
9. Ukugcina umphumela, thepha isithonjana somcibisholo ekhoneni eliphezulu kwesokudla;
10. Esikrinini esilandelayo, iya ku- Londoloza bese kungena Gcina kudivayisi yakho. Isithombe sizogcinwa kugalari noma kulabhulali ye-smartphone yakho.
Faka isithombe njenge-watermark
I-PicsArt futhi ikuvumela ukuthi ufake isithonjana senkampani yakho esikhundleni sokuthayipha igama lakho lomkhiqizo. Ukuze wenze lokhu, okokuqala udinga ukuthi ube nesithombe sakho se-logo ku-JPG kufayela le- igalari o Ilabhulali Umakhalekhukhwini.
Ngakho-ke vele ulandele izinyathelo 1 kuya ku-3, kuboniswe ngenhla. Ngemuva kwalokho, kuthileyi wethuluzi, thepha Isithombe. Khetha ifayela olifunayo bese uqinisekisa ku- Faka.
Njengombhalo, ungalungisa ukuma nobukhulu besithombe esifakiwe ngokuthepha nokuhudula. Ukwenza usayizi ngenkathi ugcina ukulingana, siphakamisa ukuthi ukhethe isithonjana somcibisholo esinamakhanda amabili.
Beka i-logo, iya enkethweni Ithuba, itholakala ezansi kwesikrini. Yehlise ibe sobala ukuze ingaphazamisi isithombe esikhulu, kepha isabonakala. Qedela inqubo ngesithonjana sokuqinisekisa (✔) phezulu kwesikrini ngakwesokudla.
Ukugcina umphumela, thepha isithonjana somcibisholo ekhoneni eliphezulu kwesokudla nakwiskrini esilandelayo iya ku Londoloza. Qinisekisa isinqumo ku- Gcina kudivayisi yakho.
Esifundweni esilandelayo, sizosebenzisa iwebhusayithi ye-iLoveIMG. Isevisi ivumela ukufaka ama-watermark kuzo zombili izithombe nombhalo, kanye nokwenza ngokwezifiso usayizi nokukhanya. Umsebenzisi futhi angafaka kalula kalula izithombe eziningi ngasikhathi sinye.
1. Vula isiphequluli osithandayo bese ufinyelela ithuluzi le-iLoveIMG watermark;
2. Chofoza inkinobho Khetha izithombe bese ukhetha isithombe ofuna ukufaka kuso i-watermark kwikhompyutha yakho;
3. Inqubo yokufaka ama-watermark ezithombeni nakumbhalo iyafana:
A) Esithombeni: uma ufuna ukufaka isithombe esifana nelogo yenkampani yakho, chofoza Ngeza isithombe. Bese ukhetha isithombe ku-PC yakho.
EYESIBILI) Embhalweni: chofoza Ngeza umbhalo. Bhala umbhalo owuthandayo, njengegama lakho noma umkhiqizo wakho. Ungenza ngezifiso izici ezilandelayo zamazwi:
Fuente: Ukuchofoza i-Arial kubonisa ezinye izinketho;
talla: kutholakala kusithonjana esinezinhlamvu ezimbili T (Tt);
Esilo: ifonti enesibindi (okwesibili), ithalikhi (yo) udwebele (U);
Umbala wangemuva: ngokuchofoza kusithonjana sebhakede lokupenda;
Umbala wezinhlamvu nensali: kutholakala ngokuchofoza uphawu lwegama UN
Ukufometha: kusithonjana esakhiwe imigqa emithathu, kungenzeka ukubeka phakathi noma ukusekela umbhalo.
4. Bese ubeka ibhokisi lesithombe noma lombhalo endaweni oyifunayo ngokuchofoza nokuhudula. Ukuze ushintshe usayizi, mane uchofoze emibuthanweni emaphethelweni bese uhudula;
5. Ukulungisa ukukhanya, chofoza isithonjana sesikwele esinezikwele ngaphakathi. Kuzovela ibha lapho unganyusa noma wehlise izinga lokusobala;
6. Uma ufuna ukufaka i-watermark efanayo kwezinye izithombe, chofoza +, ngakwesokudla kwesithombe. Bese ukhetha ezinye izithombe kwi-PC yakho;
Ungachofoza kulowo nalowo ukubona ukuthi uhlelo lokusebenza luzobukeka kanjani futhi uzilungiselele ngawodwana, uma kunesidingo.
7. Chofoza inkinobho Izithombe ze-Watermark;
8. Landa ifayela ku- Landa izithombe ezinama-watermark. Uma ufake i-watermark ezithombeni eziningi ngasikhathi sinye, zizolandwa kufayela elikufomethi ye-zip.
Uma ufuna ukusebenza ungaxhunyiwe ku-inthanethi futhi ungazimisele ukukhokhela uhlelo lokuhlela, ungasebenzisa iPaint 3D. Uhlelo luvela ku-Windows 10. Uma unale nguqulo yesistimu efakwe kwikhompyutha yakho, mhlawumbe unesoftware nayo.
Ngokungafani nezinketho zangaphambilini, akunakwenzeka ukushintsha i-opacity. Ngakho-ke uma ufuna umphumela ocashile, kungaba ngcono ukusebenzisa ezinye zezixazululo eziboniswe ngenhla.
1. Vula i-Paint 3D;
2. chofoza Imenyu;
3. Bese uye ku- Faka bese ukhetha isithombe ofuna ukubeka kuso i-watermark;
4. Njengoba isithombe sivulekile ohlelweni, chofoza Umbhalo;
5. Chofoza esithombeni bese ufaka umbhalo we-watermark. Ekhoneni elingakwesokudla kwesikrini, uzobona izinketho ezitholakalayo zomsebenzi wombhalo. Ukuze ukusebenzise, ​​qala ngokukhetha umbhalo negundane.
Umbhalo we-3D noma we-2D- Kuzokwenza umehluko kuphela uma uzosebenzisa umsebenzi we-3D View noma i-Mixed Reality function;
Uhlobo lwefonti, usayizi nombala;
Isitayela sombhalo: isibindi (N), ithalikhi (yo) udwebele (S)
Isendlalelo sokugcwalisa- Uma ufuna umbhalo ube nesizinda esinemibala. Kulokhu, udinga ukukhetha umthunzi oyifunayo ebhokisini eliseduze kwawo.
6. Ukubeka umbhalo lapho uwufuna khona, chofoza bese uhudula ibhokisi. Ukwenza usayizi webhokisi lombhalo, chofoza bese uhudula izikwele ezisemngceleni;
7. Uma uchofoza ngaphandle kwebhokisi lombhalo noma ucindezela ukhiye we-Enter, umbhalo ulungiswa lapho ufakwe khona futhi awusakwazi ukuhlelwa;
8. Ukuphetha, landela indlela: Imenyu → Gcina Njenge → Image. Khetha ifomethi ofuna ukuyonga nokugcina ngayo Gcina.
Uma ufuna ukusebenzisa i-logo yenkampani yakho, vele wenze ifayela le- izinyathelo 1, 2 no-3 bese uyaphinda, kepha kulokhu, uvula isithombe selogo. Ngemuva kwalokho mane wenze izinguquko ezikhonjiswe kufayela le- isinyathelo 6 bese ugcine, njengoba kukhonjisiwe ku isinyathelo 8.
Ungayenza kanjani i-letterheads eZwini
Abahleli Bamavidiyo Abakhulu Abakhulu Bamadivayisi weselula
'I-Photoshop' eku-inthanethi: Izindlela ezihlukile zokuhlela isithombe zamahhala
Ungazi kanjani ukuthi umdlalo usebenza ku-PC yami
Izinhlelo ezi-8 ezinhle kakhulu zokuswayipha ku-PC
Izinhlelo zokusebenza ezi-7 ezinhle kakhulu ezishintsha umbala wezinwele ngesikhathi sangempela
Wazi kanjani ukuthi i-iPhone ingeyangempela noma ingeyamanga futhi ingakhohliswa
Izinhlelo ezi-8 ezinhle kakhulu ze-webcam zeWindows, MacOS, neLinux
Izinhlelo zokusebenza zesimo sezulu eziyi-6 ukuze isimo sezulu singakutholi ungalindelanga
Izinhlelo eziyi-8 zokwenza imidlalo ku-PC noma ungazi ukuthi ungahlelela kanjani
Ababukeli bezithombe abayi-10 abahamba phambili bohlelo lokusebenza lweWindows
Izinhlelo ezi-6 zokwenza i-flash bootable ye-Windows, Linux ne-MacOS
Iqiniso noma izindaba ezingezona: ungasho kanjani uma izindaba zingamanga noma ziyiqiniso
Ungathumela kanjani izithombe namavidiyo ezindabeni ze-Instagram ku-PC ngo-2020
Ikhibhodi ayilungiselelwe - indlela yokuxazulula inkinga nokulungisa inkinga